Phakamisa abaQokeleli baBenzi kunye nabaXhasi | I-China Boom yokuPhakamisa iFektri
Ukuphakamisa iBoomI-Daxlifter yaseChina yokuphakamisa i-boom lift inokusetyenziswa okubanzi: UkuSebenza okuFanelekileyo okuSebenza ngokuLula: ngokulula ngakumbi ukurhuqwa yimoto naphina ekusebenzeni kwesikere sokuphakamisa. , ukuphakamisa i-boom lift, ukuphakamisa i-aluminium kunye namanye amaqonga omsebenzi wasemoyeni zonke kufuneka zithuthwe ngelori enkulu ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Uluhlu olubanzi lokusebenza: eyahlukileyo ngesikere sokuphakamisa, ukuphakamisa ialuminium kunye nokunye ukuphakamisa izilwanyana, ukuphakamisa i-boom lift akusebenzi kwicala elithe nkqo kodwa kunokufikelela kumgama othe tyaba ukusuka kwi-5.2m ukuya kwi-9.5m.
I-boom ye-boom lift yinto enye yeemveliso zethu eziphambili. Inokuphakama okuphezulu, indawo yokusebenza enkulu, kwaye ingalo inokugoqwa ngaphezulu kwemiqobo esibhakabhakeni.Ukuphakama kweMplatform ye-Max kunokufikelela kwi-16m ngomthamo we-200kg.
I-China Boom Lift icacisiwe itafile yohlobo lweqonga lomsebenzi we-eriyali emsebenzini wethu wemihla ngemihla.Oqoqosho ngakumbi nangokufanelekileyo xa kuthelekiswa nokuziphakamisa kwe-boom lift.Cause inokutsalwa yimoto ukuya kuyo nayiphi na indawo yomsebenzi.
Ukuphakanyiswa kokuphakanyiswa kwe-boom ephakanyisiweyo kunokuziqhelanisa nemeko ethile yokusebenza yendawo yokulungisa iinqanawa. Ukuhamba kweqonga kunye nokujikeleza kwe-boom kufuneka kuxhotyiswe ngeebhuleki ezinokuthenjwa ukuze kuqinisekiswe ulawulo oluthembekileyo kwi-ramp kwaye ngexesha lokusebenza.
Ukuphakama kweDaxlifter yokuHanjiswa okuPhakanyisiweyo kweBoom ngamandla ebhetri yinto yemveliso kwikhathalogu yethu yemveliso. Ezona nzuzo zinkulu kukuba i-boom echaziweyo inokwenza ngokulula ngomqobo esibhakabhakeni.
Ukuphakanyiswa kweTelescopic Boom Phakamisa ngamandla edizili kufanelekile ukusetyenziswa kwiindawo ezinkulu zokwakha, iiyadi ezinqanaweni, ukwakhiwa kwebhulorho kunye nezinye iiprojekthi, ngokuhamba okungenakuthelekiswa nanto kunye nokusebenza kakuhle komsebenzi. Ewe ixabiso layo liphezulu kakhulu.
Ukuphakanyiswa kweTelescopic Boom yokuPhakamisa
Elona nqaku libalulekileyo lokuphakamisa i-telescopic boom lift kukuba inokufikelela kubude obuphezulu beqonga xa ithelekiswa ne-slef eqhutyelwe ukuphakanyiswa kwe-boom lift.
Ukusebenza okubanzi komsindo kuyenza ilungele iintlobo ezichanekileyo zemeko ye-Wordking. Uyilo loLwakhiwo olukhethekileyo lunokusetyenziswa kokubini ngaphandle nangaphandle, kwaye kukho izibonelelo ezininzi zokuphakamisa i-boom lift, iJamani AL-KO Retractor enebrake yokupaka kunye ne-inertia brake. Ukutsala intonga engabalulekanga yokuhambisa ngokufanelekileyo kunye nokulayisha isikhongozeli. Itanki yeoyile yeHydraulic ngenkqubo yokuhluza: zombini ukungena kweoyile kunye nokuphuma kweoyile zixhotyiswe ngesisefo, uxinzelelo lwegeji aluyi kuba ngu-0 kwakhona xa ibhulorho yendlela engcolileyo.